युवतीहरूमाथि लगातार ‘सिरिन्ज’ आक्रमण -
युवतीहरूमाथि लगातार ‘सिरिन्ज’ आक्रमण
पछिल्लो डेढ महिनामा काठमाडौंमा लगातार रुपमा युवतीमाथी ‘सिरिन्ज’ आक्रमणका कार्यहरु भैरहेका छन् ।
एउटा घटना डेढ महिनाअघि भए पनि पछिल्ला केही दिनमा उस्तै प्रकृतिका तीन घटना दोहोरिएका हुन्। सिरिन्ज आक्रमणमा परेका चार युवती उपचारका लागि आएको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले बताए ।
एचआइभी तथा हेपाटाइटिस बी र सी संक्रमित सिरिन्ज प्रहार गरिएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको आशंका छ । तर, उनीहरूमा यी रोग संक्रमण भए–नभएको रिपोर्ट आउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने डा. बाँस्तोलाले बताए ।
यता आक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान धालेको छ । अहिलेसम्म युवतीहरूलाई सिरिन्ज वा अन्य धातुले प्रहार भएको हो भन्ने अझै यकिन नभएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयकी प्रवक्ता एसएसपी किरण बज्राचार्यले बताए ।